GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! 5.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more!
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
GuitarTuna ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး tuning app ကိုပါ!
ဂစ်တာ, ဘေ့စ, ukulele အပေါင်းတို့နှင့်လူကြိုက်များ string ကိုတူရိယာများအတွက်အဆုံးစွန် tuner ။ GuitarTuna သန်း 90 ကျော်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပြီးအခုမှစများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကအသုံးပြုနေပါသည်!
အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက် built ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး tuner ပါသလဲ
•ရိုးရှင်းသောနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ။ Built-in မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. လျှပ်စစ်နှင့် acoustic guitar တွေကိုလည်းနှင့် string ကိုတူရိယာနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကေဘယ်လ်ကြိုးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
•ပြည့်စုံအရင်ကဆိုရင်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ဂစ်တာဆရာ, ဆရာမများကအကြံပြုသည်။
•ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ signal ကိုသမိုင်းနှင့်အတူရှင်းလင်းမည်အမြင်အာရုံတုံ့ပြန်ချက်။
•ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်အသံအသိအမှတ်ပြုမှု algorithm ကိုပေါ်တည်ဆောက် - Yousician powering တူညီသောနည်းပညာ
အဆင့်မြင့်ကစားသမားများအတွက်• Professional ကတိကျမှန်ကန်မှု
•အော်တို mode ကို tuner (string ကိုတို့ကစူပါအစာရှောင်ခြင်း tuning အဘို့, လက်-အခမဲ့, string ကို) နှင့်တစ်ဦး chromatic tuner!
အားလုံးဂီတသမားတို့အတွက်အဆင့်မြင့် tools များ:
• Metronome: ကိုမဆိုတစ်ခုရဲ့ tempo မှာသတ်မှတ်ထားကိုယ်တိုင်စည်းချက်ကိုပြောင်းလဲပါသို့မဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအမြန်နှုန်းမှာနှိပ်ခြင်းဖြင့်
•6Ultimate Chord သင်ယူအားကစားပြိုင်ပွဲ: သင်ယူလေ့အကျင့်များနှင့်မာစတာ Chord များနှင့်နားကိုအားဖြင့်သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်စွမ်းဖွံ့ဖြိုး
• Chord စာကြည့်တိုက်: အလွယ်တကူမဆိုစိတျဝငျစားပုံကိုရှာဖွေကြောင့်အသံသငျ့သညျကိုဘယ်လိုနားမထောင်
•ဂစ်တာသီချင်းများ Learn: တလျှောက်ဆော့ကစားနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့ဂစ်တာသင်္ကေတ (tabs များ) နှင့်အတူ4သီချင်းများ
•အခြားရွေးချယ်စရာ tuning အစုံ
•လျှပ်စစ်နှင့် acoustic guitar တွေကိုလည်း
•အတော်များများသည်အခြား string ကိုတူရိယာ
: အပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည် 100 ကျော် Tune,
• Drop-D ကို
Drop-တစ်ဦးအပါအဝင်• 7-string ကို Tune
• 12-string ကို
အပိုဆောင်း features တွေ:
•ဂစ်တာသင်ခန်းစာများ / အတန်းနှင့်အတူမယ်လို့ Chord, riffs, tabs များနှင့်နားကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, သင်၏ Pick မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ရုံသင်တို့ကဲ့သို့
• app ကိုကွဲပြားခြားနားသော headstock ပုံရိပ်ယောင်များရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သင့်တူရိယာတူအောင်လုပ်
ကဂစ်တာသို့မဟုတ်တူရိယာစာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သတိထားပေးပါ။ ကျနော်တို့က YouTube ကိုသင်ခန်းစာစောင့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ပြုသောအမှုဖွင့်ပုံကိုတစ်ဦးဂစ်တာကစားသမားမေးမြန်းခြင်းအကြံပြုပါသည်။ Beginners မလျော်ကန်သော tuning နည်းစနစ်တွေနဲ့ညှို့ကိုရယူရန်အန္တာရာယ်။
GuitarTuna ပင်ပိုကောင်းစေစိတ်ကူးများရှိသလား? support@guitartuna.com: ရန်သင့်စိတ်ကူးများနှင့်အကြံပြုချက်များပေးပို့ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားအခမဲ့ဂီတသင်ယူမှု app ကို Download:
Yousician - လေ့လာသင်ယူလေ့အကျင့်များနှင့်ဂစ်တာ, စန္ဒရားနှင့် ukulele ကျွမ်းကျင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု
*** **** 119 နိုင်ငံတွေအတွက် # 1 ပညာရေး app ကိုအဆင့်
*** *** 2015 ခုနှစ်တွင်နှစ်ကြိမ် Editor ကိုဖွင့်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့
*** သန်း 25 ကျော်အသုံးပြုသူများကို ***
Youtube ကိုနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ Yousician အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
6sto စတိုး 3.33k 462.35k
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.4.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://app.yousician.com/account/profile#/privacy-notice
လက်မှတ် SHA1: D0:D3:E2:D1:17:F6:4A:F0:C1:D9:26:AA:9E:3D:91:7D:31:61:3B:9B
အဖွဲ့အစည်း (O): Ovelin
GuitarTuna - Tuner for Guitar Ukulele Bass & more! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ